1 Mpanjaka 3 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 3
Fanambadian'i Salomona - Sorona sy fahitana tao Gabaona - Fitsarana nataon'i Salomona.
1Nisy fihavanam-panambadiana nampiray an'i Salomona tamin'i Faraona mpanjakan'i Ejipta, fa nanambady ny zanakavavin'i Faraona izy, dia nitondra azy ho ao an-tanànan'i Davida, mandra-pahatapitra ny fanorenana ny tranony sy ny tranon'ny Tompo ary ny manda manodidina an'i Jerosalema. 2Nefa teny amin'ny fitoerana avo ihany no nanaovan'ny vahoaka sorona, fa mbola tsy nisy trano natao ho an'ny anaran'ny Tompo hatramin'izany andro izany. 3Tia an'ny Tompo Salomona ary nandeha araka ny fitsipik'i Davida rainy, nefa mbola teny amin'ny fitoerana avo ihany no nanaterany sorona sy nandoroany zava-manitra.
4Dia nankany Gabaona Salomona hanao sorona, fa tany no fitoerana avo malaza. Sorona dorana arivo no nateriny teo ambonin'io otely io. 5Ary Iaveh niseho tamin'i Salomona tamin'ny nofy, nony alina, tany Gabaona, ka hoy Andriamanitra taminy: Angataho izay tianao homeko anao. 6Dia hoy ny navalin'i Salomona: Efa naneho fitiavana lehibe tamin'i Davida mpanomponao raiko hianao, araka ny nandehanany teo anatrehanao, tamin'ny tsy fivadihana sy fahamarinana, ary fahitsiam-po taminao; notohizinao izany fitiavana azy lehibe izany, ka nomenao zanakalahy izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany izy, araka izao hita izao. 7Ary ankehitriny, Iaveh Andriamanitra ô, efa nampanjaka ny mpanomponao handimby an'i Davida raiko hianao; izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely tsy mahay mitondra tena. 8Ary ny mpanomponao dia eo afovoan'ny vahoakanao, izay nofidinao, vahoaka be dia be, tsy azo vinavinaina ny habetsahany, tsy tambo isaina, fa maro be loatra. 9Koa saina mahiratra no omeo ny mpanomponao, hitsarako ny vahoakanao, hanavahako ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no hahay mitsara izao vahoakanao maro be izao!
10Nankasitrahan'ny Tompo ny nangatahan'i Salomona izany zavatra izany taminy. 11Ka hoy Andriamanitra taminy: Noho hianao nangataka izany zavatra izany, ka tsy nangataka andro maro ho anao, sy tsy nangataka harena ho anao, ary tsy nangataka ny ain'ny fahavalonao ho anao; fa ny saina no nangatahinao ho anao mba hitsara araka ny rariny; 12dia indro, tanterahiko ny teninao, fa omeko saina hendry sy mahiratra hianao, ka ny olona talohanao tsy nisy toa anao, ary tsy hisy toa anao ny olona hitsangana ato aorianao. 13Omeko anao mbamin'izay tsy nangatahinao koa aza, dia harena amam-boninahitra, any ka tsy hisy toa anao na iza na iza amin'ny mpanjaka mandritra ny andronao rehetra. 14Ary raha mandeha amin'ny làlako hianao, ka mitandrina ny didy aman-dalàko, toy ny nandehanan'i Davida rainao, dia hohalavaiko ny andronao.
15Nahatsiaro Salomona ary nahalala fa nofy izany. Ary nony tafaverina tany Jerosalema izy, dia nitoetra teo anatrehan'ny fiaran'ny faneken'ny Tompo, ka nanatitra sorona dorana sy sorom-pihavanana ary nanao fanasana ho an'ny mpanompomy rehetra.
16Tamin'izay dia nisy vehivavy ratsy fiaina anankiroa, tonga teo amin'ny mpanjaka ka nitoetra teo anatrehany. 17Hoy ny iray tamin'izy ireo: Mitaraina aminao aho tompoko, fa niray trano izaho sy ravehivavy ity, ary teraka teo anilany tao an-trano aho. 18Nony afaka hateloana ny niterahako, dia mba teraka koa ravehivavy io. Niara-nonina izahay, ary tsy nisy olon-kafa niaraka taminay tao an-trano; fa izahay roa vavy ihany no tao an-trano. 19Maty tamin'ny alina ny zana-dravehivavy io, fa voatsindriny tao am-pandriana. 20Ka nony nisasaka ny alina, niarina izy, nalainy ny zanako teo anilako, raha ilay mbola natory iny ny ankizivavinao, ka io no nampandriny teo an-tratrany, fa ny zanany efa maty no nampandriny teo an-tratrako. 21Nony niarina aho tamin'ny maraina hampinono ny zanako, dia indro fa maty izy. Nodinihiko tsara anefa ity izy nony maraina, ka hitako fa tsy ilay zanako naterako akory. 22Hoy ilay vehivavy anankiray: Tsia fa ny zanako naterako no velona, ary ny zanakao no maty. Fa namaly ity anankiray nanao hoe: Tsy izany velively, fa ny zanakao no maty, ary ny zanako no velona. Dia nifanditra toy izany teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo.
23Hoy ny mpanjaka, nanao hoe: Ny iray manao hoe: Ny zanako no velona, ary ny zanakao no maty. Ny iray kosa manao hoe: Tsy izany velively, fa ny zanakao no maty, ary ny zanako no velona! 24Ary hoy ny mpanjaka: Itondray sabatra aho. Dia nitondrana sabatra teo anatrehany ny mpanjaka, ka hoy ny mpanjaka: 25Sasaho ny zaza velona, ka ny ilany anankiray omeo an'ity, ary ny anankiray omeo an'itsy. 26Niteny tamin'izay ity vehivavy tompon'ny zaza velona; fa nahatsiaro mangoraka ny fony noho ny amin'ny zaza, ka hoy izy tamin'ny mpanjaka: Tompokolahy ô, omeo azy re ny zaza velona; fa aza dia vonoina! Fa hoy kosa ity anankiray: Aoka tsy ho ahy, tsy ho anao, fa zarao. 27Dia namaly ny mpanjaka nanao hoe: Omeo an'ity ny zaza velona fa aza vonoina; fa ity no reniny. 28Nandre ny fitsarana navoakan'ny mpanjaka Israely rehetra, ka natahotra ny mpanjaka ny olona, satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao aminy, mba hitsarany marina. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3106 seconds